2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe (561314-57-6) - APICMO
Products > 2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one (561314-57-6)
Iko kukwanisa kubudisa, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe (561314-57-6) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
SKU: 561314-57-6 Category: Spiro compounds
Muchiedza chekuvandudza gPIIb-IIIa yevamwe vanopikisana nemishonga yakagadziriswa yemishonga, takashandisa nhamba 2,8-diazaspiro [4.5] decane scaffold se template. Inotsanangura pano kutsvakurudza kwemhando dzakasiyana-siyana dzemu templates kusanganisira spiropiperidinyl-γ -lactam, spiropiperidinylimide, spiropiperidinylureas, uye spiropiperidinylhydantoins. Neyakakodzera acidic uye pharmacophores inokosha munzvimbo, imwe template yakabereka anogues neGPIIb-IIIa inobvisa basa. Imwe yemakemikari, 59 (CT50787), yakashandiswawo kuratidza kuti panguva yokutanga kushandiswa kwemugadziri wezvemasikirwo iyo αIIbβ3 yakananga kuratidza chiito chezvisikwa muzvisikwa zvakaderera zvakadai semarara uye kuwedzera kubuda ropa nguva. Kuongororwa kwemapurmacokinetic maitiro emasanganiswa akasarudzwa kubva kune imwe nhepfenyuro mumakato, mbwa, uye cynomolgus monkey yakatungamirira kuzivikanwa kwe22 (CT51464), chirwere chechipiri, uye ine pharmacokinetic yakaisvonaka. Iyo inoratidzira zvakanaka pharmacokinetic profile pane marudzi (Fpercent = 33 (Cyno), 73 (imbwa), 22 (rat); t1 / 2β = 14 2 h (Cyno), 8.97 h (imbwa), 1.81 h (rat)). Nhengo yehupenyu inoshandiswa, 23 (CT50728), inoratidzirwa kushandiswa kweplatelet aggregation mu platelet rich plasma (PRP) ine IC50 kukosha kwe53 nM mu citrate buffer, 110 nM mu PPACK anticoagulated PRP, uye 4 nM muGPIIb-IIIa yakasimba makwikwi anosunga assay (ELISA). Zvose zviviri 23 uye 22 zvakagadzikana mukati mevanhu microsomes yeropa, hazvina kuvhara P450 3A4 isozyme, uye yakanga ine puroteni yakadzika (18.22percent ye23) uye chidimbu chinonzi P (0.45 ± 0.06 ye22, uye -0.91 ± 0.32 ye23). Izvo zvakagara zvataurwa kuti iyo yakanyanya kunyora bioavailability yezvikamu izvi mumarudzi akawanda emhuka inofanira kushandurirwa muhutano hwakaderera hwemukati uye-intersubject mumunhu. Iyo ipurasma yakareba hafu-hupenyu hwekutungamira inopindirana kamwe kana kaviri zuva rega rega kurapa kwechirwere chisingaperi. Analogue 22 (CT51464) saka inoratidzika seyakasimbisa muromo weGPIIb-IIIa inhibitor uye yakanyatsogadziriswa pharmacokinetic miviri pamusoro pevakarondedzerwa mumakiriniki uye inogona kuwanikwa inobatsira mukurapa zvirwere zvinokonzerwa nemagetsi.
MDL Nhamba MFCD11044206
Kemikari Zita kana Nyaya 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe
Physical Form N / A
Molecular Weight (g / mol) 154.212
Assay ≧ 98%
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe (561314-57-6) Kudzivirira uye Kutarisa
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe Tsanangudzo yenjodzi:
w Inokuvadza kana ikamedzwa
561314-57-6 Precautionary statement:
w Pfeka gasikudzivirira nekudzivirira kweziso / chiso.
Kuwanikwa kweNorodhe 2,8-Diazaspiro [4.5] kupesana seyakashandura Glycoprotein IIb-IIIa AntagonistsMehrotra,
Muchiedza chedu kuti tive nevanopikisa GPIIb-IIIa nevanopikisa nemishonga yakagadziriswa yemishonga, takashandisa nhoroondo 2,8-diazaspiro [4.5] decane scaffold se template ... Journal of Medicinal Chemistry 2004.
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe (561314-57-6) Shanduro yeKambani:
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe (561314-57-6) Kurayira Kukuru & Kutengo:
2 anodzokorora nokuti 2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one (561314-57-6)
APICMO, isu tinogadzira, tinobudisa uye tinogadzira 561314-57-6 muzhinji uye mune zvakanakisisa uye zvinokwanisika. Zvose zvatinotengesa zvinoenderana nemitemo yose yakagadzirirwa neCGMP pamusoro pehutano hwehutano mukugadzira.
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe iri muchikamu chakafanana;
Bicyclo [xyz] alkanes.
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-rimwe inonziwo;
3,8-Diazaspiro [4.5] decan-2-imwe.
2,8-diazaspiro [4.5] decane-3-imwe.
IUPAC Zita rechigadzirwa ndi2,8-diazaspiro [4.5] decan-3-one.
Kemikari Zita rechigadzirwa ndeye 2,8-diaza-spiro [4.5] decan-3-one.
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe Yakagadziriswa Formula.
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, 561314-57-6 Product Specification
HAKASI HERE 561314-57-6
Molecular Weight (g / mol) 154.213
Kuwedzera (g / cm3) 1.129
Boiling Point 360.137 degree Celsius pa 760mmHg
Monoisotopic Misa (g / mol) 154.111
561314-57-6 Kemikari uye Zvimwe Zvisikwa
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe inoratidzika sepoda yakachena.
Covalent Bond 1
Hydrogen Bond Donor- 2
561314-57-6 inowanzogadzikana kana yakachengetwa pasi pemamiriro ekurudzirwa.
Dzivisa kutaridzirwa kune matsime, murazvo uye kupisa.
Usaisa pachena kune zvinhu zvisina kufanana zvakadai seAidid chloride, Acid anhydrides, acids uye oxidizing agents.
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, 561314-57-6 Computed Properties
Misa chaiye (g / mol) 154.111
Topological Surface Area 41.1A ^ 2
561314-57-6 Synthesis Route
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe ine imwe chete nzira.
Synthesis Route for 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe
2nd Synthesis Route
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe inoshandiswa sepakati pezvakagadzirwa zvehupenyu.
2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe Kuita Zvokuchengetedza Zvokuchengetedza
1. 561314-57-6 Engineering Controls
Shandisa 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, 561314-57-6 maererano nekuchengetedzwa kwekuchengetedza uye kuchena kwehuwandu hwehupfumi.
Shandisa makemikari fume hood pose paunenge uchishanda pa 561314-57-6.
Dzivisa chero kuumbwa kweguruva kana kuti aerosols.
Dzivisa kufema gasi, mhute, guruva nemhepo.
Nguva dzose oshamba maoko zvakakwana musati wapedza uye shure kwebasa rezuva.
2. 561314-57-6 Kuzvidzivirira Kwevanhu Nekuchengeteka
Nguva dzose tive nejasi rekudzivirira rinofanira kusanganisira; kuchengetedzwa kwemagetsi, mabhandiro e laboratory uye makemikari asingadziviriri magasi.
Shandisa magirafu akaongororwa kuti udzivirire maoko ako pose paunenge uchibata 561314-57-6.
Nguva dzose yeuka kutevera nzira yakakodzera yokubvisa magasi; usabata nzvimbo yekunze yemagetsi akaipisa kuti usapinda kuganda.
Kuteerera nemitemo yakanaka uye mitemo inoshandiswa paunenge uchidzivirira magirafu akasvibiswa.
Geza nekushamba maoko ako.
Neziso Nechiso Kudzivirirwa
Kudzivirira kweziso kunofanira kuongororwa uye kugamuchirwa nehurumende.
Shandisa magirazi ekuchengeteka ane mazamu-edzivirira anoenderana neE166.
Shandisa mufananidzo P1 (EU EN 143) kana kuti P95 (US) chepiritori chemhepo inokonzera kushungurudzika.
Shandisa mufananidzo ABER-P2 (EU EN 143) kana kuti shanduro yeOV / AG / P99 (US) mapiritsiji emhepo ekudzivirirwa apo nzvimbo dzekufambisa dzakakwirira.
Zvose zvinokonzerwa nemapiritsi zvinofanira kuongororwa uye zvinogamuchirwa.
3. 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, zvakatipoteredza kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa
Usabvumira 561314-57-6 kupinda kupinda nguva dzose.
4. 561314-57-6 Mibatsira yekutanga
Kana inyorerwa kana ikamedza
Sungedza muromo uzere nemvura yakawandisa kwemaminetsi e15.
Tsvaka rubatsiro rwekurapa kana zano.
Nenguva iyo unobvisa maziso nemvura zhinji kwemaminitsi e15 kana dzimwe nguva uchisimudza maziso emafambiro ari kuruboshwe uye wakarurama apo iwe unoramba uchitsvaga.
Tsvaka rubatsiro rwekurapa kana zviratidzo zvichiripo.
Nenguva iyo bvisai munhu wacho kubva pakuona.
Uya nematambudziko kune nzvimbo yakazaruka nehuwandu hwemhepo kana kuti mudzimba wakanaka.
Tsvaka rubatsiro rwekukurumidza rwechiremba pamhosva dzakaoma kana kuti zviratidzo zvinoramba zvichiripo.
Gezai nzvimbo yakakanganiswa nemvura yakawanda yemvura uye sipo yakanyoro.
Tsvaga chiremba wako kana chiremba kana zviratidzo zvichiripo.
5. Tora Mazano Anotevera Paunoshandisa 561314-57-6
Iva nechokwadi chokuti iwe unoshanda nguva dzose muikemikari hood kana uchishanda pa 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe.
Kupfekedza gear inodzivirira kukanganisa kusangana nemakemikari.
Dzivisa kugadzirwa kweguruva uye zviputi.
Dzivisa kudzokorora nekuwedzerwa kwenguva refu kune 561314-57-6 sezvo zvingakonzera kugadzikana kwevanhu kune vanhu vane hanya.
6. Mushure mekushandisa 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, chengetedza iwe;
Dzorera zvakasimba chigadziko nemuchero.
Dzorera iyo mudziyo kusvika pakuchengeterwa kwayo kwepakutanga.
Kushambidza uye kuchenesa nzvimbo yakashanda uye bvumira mweya mutsva kuti upinde mauri.
Bvisa nguo dzose dzakasvibiswa uye shangu; Shamba zvakafanana usati washandisa zvakare.
7. Apo 561314-57-6 isiri kushandiswa, ona kuti iwe;
Chengetedza munzvimbo yakachena uye yakaoma; kudzivisa unyoro.
Chengetedza chigadzirwa chakavharwa kubva kuvanhu vasingabvumirwi.
Dzivisa chero kupi zvako kusinganzwisisiki zvakadai se; Acid anhydrides, Acid chloride, acids uye oxidizing agents.
8. 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe Kuchengeta Nokubata
Shandisa 561314-57-6 pasi pekutarisa kwakakwana kwomunhu anodiwa; munhu wacho anofanira kunge ane ruzivo mukubata pamwe nemakemikari ane ngozi uye nyaya dzehutano, moto nemakemikari njodzi.
Usarega kubatana namaziso uye ganda.
Dzivisa kufema gasi, guruva, mhute nemhepo.
Nguva dzose shandisa magadzirirwo gear.
Shandisa mune imwe makemikari fume hood.
Iva nechokwadi kuti pane kuputika kwakakwana kwese paunenge uchibata ne 561314-57-6.
Chengeta 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe firiji mumidziyo yakapfigwa.
Nzvimbo yekuchengetedza inofanira kuve yakachengetedzwa kuti ichengetedze vanhu vasingabvumirwi.
Iva nechokwadi kuti ventiro yakakwana inowanikwa munzvimbo yekuchengetedza.
Chengeta 561314-57-6 munzvimbo inotonhorera uye yakaoma.
9. 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, 561314-57-6 Kurasikirwa Kwemakemikari
Burn 561314-57-6 mune imwe makemikari incinerator iyo yakagadzirirwa mushure mekupisa uye shrubber.
Iva wakangwarira zvikuru paunenge uchinge waisa zvinhu izvi se561314-57-6 inopisa zvikuru.
Ipai chero sarudzo dzisingabatsiri uye dzisingashandiswi zvekudzivirira zvakasimba iyo inobvumirwa.
Dana unyanzvi hunoshandiswa hwemarara rinoshandiswa kuti usiye chigadzirwa ichi.
10. 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe Sensitivity uye Reactivity
Dzivisa mashizha, mazhenje uye kupisa.
Chengetedza 561314-57-6 kure nevhujidhi.
Dzivisa mikana inokuvadza inokuvadza yakadai se nitrogen oxides uye carbon monoxide.
11. 561314-57-6 Miedzo inopinda
Kupfekedza gadziriro yakakodzera yekuchengetedza iyo inosangana nemunharaunda, yehurumende, uye yehurumende uye inoita zvinogutsa.
Iva nechokwadi chokuti iwe unopfeka maski kana kupumhidza kunogamuchirwa.
Chengetedza maoko ako uchishandisa gauntlets yakafanira kana magirafu.
Kupfeka maziso ekudzivirira maziso.
Moto Kurwisa Mikana
Mukana wemoto unosanganisira 561314-57-6 pamwe chete kana nedzimwewo zvinhu, shandisa carbon dioxide, mvura spray, doro risingadziviriki uye pfuwa yakaoma kuti igadzire.
Sakanidza ne inert inobata sakaita sejecha zvino inosva nekushandisa kwefoshoro kuunganidza tsvina mumudziyo wakanyorwa kuti uwane.
12. 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, 561314-57-6 Utano Hwehutano
561314-57-6 inokuvadza kana inyorerwa sezvo inogona kukonzera chirwere chepamuviri chinotsamwisa.
Dzivisa kuputika kwe561314-57-6 sezvo inogona kukonzera kutsamwa kwekupemha.
Usabvumira kusangana kweziso ne 561314-57-6 sezvo inogona kukonzera kutsamwa kwemaziso nekukuvara.
Dzivisa kusangana neganda sezvo zvinogona kukonzera kupisa kweganda.
m)2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, 561314-57-6 Regulatory Info
Zvose makemikari ari munyaya iyi haisi pasi pekutaura zvinodiwa zvakasikwa neSARA Title iii, Chikamu 302.
ICAS Kwete munyaya iyi haipfuuri mizinga yehutano inoshandiswa neChita cheSARA, Chikamu 313.
n) 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe Kutumira Info
561314-57-6 haisi nengozi chero ipi zvayo yekufambisa.
Iyo yakachengeteka kutumira, mhepo uye kutakura kwenyika.
Nhengo yedu yeruzivo ine ruzivo uye yakanakisisa mu Material Science, Life Science, Chemicals Analysis, Chromatography nezvimwe.
13. 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe 561314-57-6 Kurayira Kuwanda uye Mutengo.
Iwe unoda 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, 561314-57-6 yakawanda here? Taura nevatengi vedu kutarisira rubatsiro.
Tai, Vincent W.-F .; Garrido, Dulce; Mutengo, Daniel J .; Maynard, Andrew; Pouliot, Jeffrey J ;; Xiong, Zhiping; Chisimbiso, John W .; Creech, Katrina L .; Kryn, Luz H .; Baughman, Todd M .; Peat, Andrew J. Bioorganic uye Medicinal Chemistry Tsamba, 2014, vol. 24, # 10 p. 2288 - 2294.
National Centre For Biotechnology Information, US. National Library yeMishonga, Pubchem, 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe, Zvikamu 1-10.
Paul C.Fritch, Jeffrey Krajewski, Bioorganic & Medicine Chemistry Letters Volume 20, Chigadzirwa, syntheses, uye SAR ye2,8-diazaspiro [4.5] decanones seT-type calcium channel antagonists, Mapeji 6375-6378
Yakaisvonaka 2,8-Diazaspiro [4.5] decan-3-imwe nebasa randakave narina, Nice experience